ကွယ်လွန်သွားသည်ဟု သတင်းအမှားများထွက်‌ပေါ်နေသည့် သရုပ်ဆောင် ဆင်မ…. – Cele Oscar
ကွယ်လွန်သွားသည်ဟု သတင်းအမှားများထွက်‌ပေါ်နေသည့် သရုပ်ဆောင် ဆင်မ….
August 29, 2021 By L YC Celebrity
ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနကေ့စလို့အာဏာသိမျးခဲ့တာ ဟာယနေ့ ထကျထိပါပဲ။တျောလှနျရေးကွီးအတှငျးမှာလဲ အသကျပေါငျးမြားစှာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောငျးမြားစှာရှိသလို မတရားအဖမျးဆီခံရတဲ့ ပွညျသူတှလေဲ မြားစှာရှိနပေါတယျ၊ပွညျသူတှနေဲ့အတူအနုပညာရှငျမြားလဲ အပါအဝငျပဲဖွဈပါတယျနျော။
သရုပျဆောငျဆငျမ ကတော့တျောလှနျရေးကွီးမှာလဲ ပွညျသူတှနေဲ့အတူတဈသားတညျးပါဝငျပွီးလမျးထှကျကာလူထုလှုပျရှားမှာတှမှောအားတကျသရောပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ပုဒျမ ၅၀၅ က ဖွငျ့အမှုဖှငျ့ထားခွငျးခံရပါတယျ။အခုဆိုရငျတော့သွဂုတျလ ၂၄ ရကျနေ့ ညမှာဆိုရငျတော့ သရုပျဆောငျ ဆငျမ ကမတရားအဖမျးဆီးခံခဲ့ရကွောငျး သိရှိရပါတယျနျော။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကစလို့အာဏာသိမ်းခဲ့တာ ဟာယနေ့ ထက်ထိပါပဲ။တော်လှန်ရေးကြီးအတွင်းမှာလဲ အသက်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်းများစွာရှိသလို မတရားအဖမ်းဆီခံရတဲ့ ပြည်သူတွေလဲ များစွာရှိနေပါတယ်၊ပြည်သူတွေနဲ့အတူအနုပညာရှင်များလဲ အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
သရုပ်ဆောင်ဆင်မ ကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲ ပြည်သူတွေနဲ့အတူတစ်သားတည်းပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှာတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ ၅၀၅ က ဖြင့်အမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ညမှာဆိုရင်တော့ သရုပ်ဆောင် ဆင်မ ကမတရားအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သိရှိရပါတယ်နော်။
စေတနာအပြည့်နဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက် ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပေးနေရင်း ရယ်ရခက် ၊ ငိုရခက်အဖြစ်နဲ့ကြုံရတဲ့ ကိုပေါက်…….
လမ်းခုလတ်မှာတင် သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ခွေးလေးမာယာကို မြေမြုတ်ပေးနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်း ရဲ့ ဗီဒီယို……